Chii chiri seri kwekodhi. Ipfupi nhoroondo yeIRIOffice chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Chii chiri seri kwekodhi. Ipfupi nhoroondo yeIRIOffice chirongwa
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, GNU/Linux, Free Software, Linux software
Makuhwa anoti Oracle mupiro mukuru pasoftware yemahara yaive yekuve yakatsamwisa chikamu chikuru chevanogadzira OpenOffice zvakanyanya. UyeIvo, vasingavimbe nezvinangwa zvekambani, vakasarudza kugadzira yavo projekiti.
Tinogona kukakavara kwemaawa kana Iyo Gimp iri imwe nzira ye Photoshop kana kana chero kugoverwa kweLinux kuri nani pane Windows. Asi muna 2009, hapana munhu mundangariro dzavo chaidzo angadai akati OpenOffice yaive imwe nzira inoshanda kune Microsoft Office.. Muchokwadi, mazhinji ekuparadzirwa kweLinux akauya neyakavandudzwa vhezheni inonzi OpenOffice Go uye vakaunza zvinyorwa zvavo (zvirinani Ubuntu) muverengi wemafomati eMicrosoft Office ayo akamhanya pasi peWine.
Zvese zvakashanduka apo Boka revagadziri rakafunga kugadzira chirongwa chakazvimirira nekubatanidza OpenOffice uye OpenOffice Go kodhi, nekudaro vachigadzira LibreOfficuye. Panguva imwecheteyo, ivo vakaumba chinzvimbo kuti vimbise mari uye kuenderera kweprojekti. Iyo Gwaro Nheyo.
Ini pachangu, ini handidi kutaura nezvemahara software maererano neA senge imwe nzira kuna B. Kana ini handisimbise hunhu hweuzivi hwemahara marezinesi. Ini ndinofunga kana iwe usingakwanise kushandisa echirongwa pachako maficha kuikurudzira, saka haina kukodzera kurudziro. Iko kugona kuverenga uye kugadzirisa kodhi haina basa kana usiri mugadziri, kugona kusevha magwaro ako uchiziva kuti kugona kuawana mune ramangwana hakunei nezvinodiwa nekambani.
1 Nyeredzi inozvarwa
2 Chii chiri seri kwekodhi. Basa reThe Gwaro Nheyo
Kwakatangira izvo zvatinoziva nhasi seLibreOffice hNgatizvitsvakei kudzoka kuma80s apo mumwe mugadziri wechiGerman anonzi Marco Börries akagadzira processor yezwi kumakomputa epamba uye MS-DOS inonzi StarWriter.. Ipapo akatanga Star Division. Ipapo pepanheti uye chirongwa chekudhirowa chakawedzerwa saka vatatu ava vakatengeswa pasi pezita StarOffice. Yechipiri vhezheni yesutu yatove nayo yakashandawo neMac.
Makore apfuura, Hardware mugadziri anonzi Sun Microsystem akatenga kambani kubva kuBörries. Zuva rakanga risina tsika yekugovera software yakadaro, uye vamwe vanofunga zvaive zvakachipa kwavari kutenga kambani yakagadzira software suites pane kubhadhara Microsoft izvo zvaakakumbira marezinesi kuzviuru zvevashandi vake.
Haisi kure kurerwa sezvazvinoratidzika paunofunga izvozvo muna 2000 iyo femu yakabvumidza kurodha mahara kweStarOffice 5.2 uye zvakare ikaigovera mumaCD akawanikwa mumagazini.
Makore apfuura, Netscape Communications, isingakwanise kukwikwidza neMicrosoft, Ini ndanga ndafunga kuburitsa sosi kodhi yeNetscape browser. Icho chaive hwaro hwebrowser iyo yatinoziva nhasi seFirefox.
Zuva rakafunga kutevera nzira imwechete uye yakaburitsa kodhi ye StarOffice muna 2000. Makore maviri gare gare kwakauya OpenOffice.org 1.0.
2005 yakatiunzira vhezheni 2.0 uye itsva faira fomati. Iyo Vhura Gwaro Fomati (ODF). Pfungwa yaive yekuti zvinyorwa zvakagadzirwa neOpenOffice zvinogona kuverengwa nechero chirongwa chingave nechokwadi chekuti dzinogona kuwanikwa nguva dzose.
Nhasi kunyangwe Microsoft Office inotsigira fomati yeODF, uye, panguva imwechete, yega yega vhezheni yeLibreOfice inovandudza rutsigiro rwemafaira emuno eiyo hofisi suite.
Chii chiri seri kwekodhi. Basa reThe Gwaro Nheyo
Kuseri kwechirongwa cheLibreOffice ndiyo Iyo Gwaro Sisekelo. TDF yakagadzirwa sehwaro hwerubatsiro pasi pemutemo wechiGerman. Sangano rakavhurika kuti vanhu vatore chikamu pamwe nemakambani nematunhu.
Mukutaura kwayo kwekutumwa inoti
Chinyorwa cheDocument Foundation ndechekufambisa shanduko yeRibreOffice Nharaunda musangano idzva, rakavhurika, rakazvimirira, uye rakakodzera. Nheyo yakazvimiririra inoratidza zvakakwana hunhu hwevano tipa, vashandisi, nevatsigiri, ichibvumira nharaunda inoshanda, inoshanda, uye yakajeka. TDF ichadzivirira kudyara kwekare kuburikidza nekuvakira pane zvakawanikwa mumakore gumi ekutanga neOpenOffice.org, kukurudzira kutora mukana kukuru munharaunda, uye kuronga zviitiko munharaunda yese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chiri seri kwekodhi. Ipfupi nhoroondo yeIRIOffice chirongwa
Zvizhinji nezve LibreOffice, iyo yakavhurwa sosi hofisi suite
GNOME Circle yakavhurwa zviri pamutemo kubvumidza mamwe maapplication uye maraibhurari kujoina GNOME